Iingcebiso ze-Instagram SEO [Iingcebiso ezi-5 eziPhambili]] ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 25, 2018 0 IiCententarios 720
Ukuphuculwa kweinjini yokukhangela yinkqubo yokwenza ibhlog yakho ibonakale ngakumbi kwiinjini zokukhangela zamagama athile okanye amabinzana. Ngamanye amagama, i-SEO lukhuphiswano nje lokuthandwa phakathi kwewebhusayithi. Umbuzo uhlala uyindawo eyaziwayo kunye newebhusayithi efanelekileyo yamagama aphambili okanye amabinzana, ngokwe-injini yokukhangela ethile. Ukuba umbuzo ubekwe ngale ndlela kwaye hayi ngokwamaqhinga e-SEO kunye nobuchule, uyakuqonda ukuba I-SEO Instagram Iya ngaphaya komxholo womgangatho kunye nokwakha ikhonkco.
Akumangalisi ukuba, ngokukhula kwezonxibelelwano zentlalo, abantu abaninzi besebenzisa ezi webhusayithi zonxibelelwano ukuze baqinise imizamo yabo ye-SEO. Iindaba ezimnandi zezi Awudingi kuqeqesho lwe-SEO ku-Instagram ukuze usebenzise ezi webhusayithi zonxibelelwano, kuba kuthatha kancinci kakhulu ukuba ungazi kakuhle ezi ndawo. Nangona ezinye iinkampani ezinkulu ziqesha inkampani ye-SEO ukuphatha amaphepha eendaba ezentlalo, akukho sizathu sokuba bangakwazi ukwenza oko ukwandisa ukuthandwa kwewebhusayithi yabo. Nokuba ufuna Khuphela amabali amadala kwi-Instagram.
Indawo yenethiwekhi yoluntu ekhule ngokuthandwayo ukusukela ekuhambeni kwayo kwi-2010 yi-Instagram, indawo yenethiwekhi yokuncokola yabelana ngezithombe. I-Instagram yaqala njengesicelo esenziwa ngabasebenzisi be-Apple, kodwa emva koko inkxaso yongezwa kwi-2012 ukuze abasebenzisi be-Android bayisebenzise. Ngelixa iimpembelelo ze-Instagram kwizikhundla zenjini yokukhangela zixoxwa, sisisixhobo esihle ukukhuthaza iwebhusayithi yakho, iimveliso zayo, iinkonzo, kwaye, ngokusisiseko, yandisa ukuthandwa kwewebhusayithi yakho kwaye ivelise i-organic traffic. Nazi ezinye Iingcebiso zokukunceda ukuba usebenzise i-SEO Instagram ukukhuthaza iwebhusayithi yakho. Sikwaxelele nokuba njani khubaza i-Instagram.
Iingcebiso ze-SEO ze-SEO
Yenza umxholo ojolise kuwo
Ukuba iakhawunti yakho ye-Instagram yeyakho iwebhusayithi okanye shishiniYenza kubonakale ukususela kumzuzu wokuqala. Qiniseka ukuba omnye umsebenzisi we-Instagram ondwendwela iphepha lakho leprofayile akanamathandabuzo engqondweni yakho ukuba yeyiphi iakhawunti yakho. Oku kuthetha ukuthintela upapasho lwakho olungahambelani newebhusayithi.
Njengoko i-Instagram yinkonzo yokwabelana ngeefoto, indlela kuphela yokubeka umxholo kukuchaza ngokuchanekileyo imifanekiso okanye iifoto zakho. Ungaze uthumele ifoto engenantsingiselo. Nditsho nenkcazo yegama elinye ibhetele kakhulu kunenye.
Sebenzisa ngokufanelekileyo iithegi ze-hash
Iimpawu zeHash zithandwa zisetyenziselwa ukudibanisa umfanekiso wakho kunye nomxholo okanye umxholo othile. Ungacinga ngezi taghi ze-hash njengamagama aphambili ngendlela eqhelekileyo uya kukhuthaza iwebhusayithi yakho. Kwakhona Ngoku unokukhuphela i-Instagram ngqo.
Thatha inxaxheba nabanye abasebenzisi
Yiya ngaphaya kokuthumela nje imifanekiso. Nxibelelana nabanye abasebenzisi Ukuphawula ngemifanekiso yabanye kunye nokuphendula izimvo zabo.
Ngayo yonke le nto kwaye ukuba uyawonyusa ubunzima bakho ekuhlaleni kwinethiwekhi yoluntu Thenga abalandeli kwi-Instagram, uya kuphucula i-SEO yewebhusayithi yakho.
1 Iingcebiso ze-SEO ze-SEO
1.1 Yenza umxholo ojolise kuwo
1.2 Chaza imifanekiso yakho
1.3 Sebenzisa ngokufanelekileyo iithegi ze-hash
1.4 Thatha inxaxheba nabanye abasebenzisi